War Deg Deg Ah:- Dawlada Soomaaliya Oo Jawaab Jilicsan Ka Bixisay Talaabooyinka Ka Dhanka Ah Ee Dawlada Kenya Qaaday |
War Deg Deg Ah:- Dawlada Soomaaliya Oo Jawaab Jilicsan Ka Bixisay Talaabooyinka Ka Dhanka Ah Ee Dawlada Kenya Qaaday
Muqdisho(GNN)War ka soo baxay wasaarada arimaha dibada Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay walaaca ay dawlada soomaaliya ka qabto talaabooyinka ay qaadayso dawlada Kenya.
Warka ka soo baxay wasaarada arimaha dibada soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in talaabooyinka ay qaadayso dawlada Kenya ay si cad uga hor imanayaan heshiisyadii ay labada xukuumadood hore u galeen.
Wasaarada arimaha dibada soomaaliya ayaa warka ka soo baxay lagu yidhi:-
“Talaabooyinka ay dawlada Kenya qaadaysaa waxay carqalad ku yihiin xidhiidhka walaaltinimo ee u dhaxeeya soomaaliy iyo Kenya sidaas darteed dawlada soomaaliya waxay ku baaqaysaa in Kenya ay ilaaliso oo ay ka fiirsato dhibaatooyinka ka dhalan kara talaabooyinka qay qaadayso isla markaana waa inay ilaalisaa xidhiidhka soo jireenka ah u dhaxeeya labada dal.
Kenya waa inay tixgelisaa dabciga dublamaasiyadeed iyo ixtiraamka labada wadan kala mudan yihiin , dawlada Soomaaliyana waxa dhankeeda ka go’an inay ilaaliso xidhiidhka ay la leedahay dawlada Kenya, waxaanay sii wadi doontaa soo dhawaynta muwaadiniinta iyo saraakiisha dawlada Kenya ee soomaaliya imanaya.”
N):-Dawlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay talaabada ay Kenya ku hor istaagtay inay fiisaha dal ku galka siiso qaar ka mid ah masuuliyiinta xukuumada soomaaliya.
Gabagabadii, warsaxaafadeedka waxaa lagu yiri “Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, iyada oo fursaddan ka faa’iideysanaysa waxay tixgelin iyo qaddarin aad u sarreysa u ballanqaadaysaa Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Jamhuuriyadda Kenya.”